Voapentimpentin'ny Glass Shirt
Natonta amin'ny White, 100% polyester loko zana t-shirt
Tagless amin'ny fanao lamba habe tenifototra pirinty
Custom 116 tenona marika nozairina tamin'ny ambany hem. Underside ny marika Mivaky toy izao, “Dia tsy mahamenatra ahy”.
Mitsangàna – Book
Mitsangàna – Album
Rakikira afaka mampianatra anareo be dia be. Amin'ny fomba maro, fa ny farany sehatra mba hamelatra amim-pahatsorana hafatra, fampitàna lesona sarobidy, ary hankalaza ny fiainana ao amin'ny hahafinaritra, vaika iombonana. Izany indrindra izay Trip Lee manao ny fahefatra lavany manontolo rakikira, “Mitsangàna.”
Mba hampitana ny hafatra, Trip naka fomba hafa ny nanoratra ity indray mitoraka. Raha tokony miara-miasa miaraka amin'ny maro mpamokatra, dia niara-niasa efa ela fotsiny amin'ny Gawvi mpamokatra ho an'ny rakikira manontolo tamin'ny Atlanta Studio.
Natonta amin'ny Mainty, 100% peratra-kofehy landihazo T-shirt.
Natonta tamin'ny malefaka-tanana inks, toy izany ny endriny atao dia malefaka ny mikasika.
Shirts dia tagless amin'ny fanao lamba habe tenifototra pirinty.
Custom 116 tenona marika nozairina tamin'ny moron-tongotry ny ambany.
Underside ny marika Mivaky toy izao, 'Dia tsy mahamenatra ahy'.
Ireo shirt manana manify nendahina. Raha tsy tianao manify mety farantsa, Avy eo izany dia nanolo-kevitra ny hanafatra ny habe ny.
tsara fanahy kokoa fiara, trano lehibe kokoa, whatever your heart desires. Everybody wants to live The Good Life. But what happens when dreams become nightmares and the promise of freedom leads to a life of imprisonment? Inona no mitranga rehefa hahita fa izany ny volamena rehetra very ny Mamiratra? Maybe the rich and famous aren’t living The Good Life. Maybe our dreams are rooted in lies. ary mety, fotsiny angamba ireo izay tsy manana tena kokoa. Inona no The Good Life…tena?
Ato amin'ity boky ity, mitondra ny lohateny hoe taorian'ny nankafizin'ny olona rakikira fahefatra, The Good Life, Kristianina mpanakanto mpiangaly rap sy ny mpanoratra, Trip Lee, Namoaka Ny zavatra izao tontolo izao, ny nofo sy ny devoly mampirisika toy ny farany, ary mahafa-po indrindra ny fiainana. Avy eo izy dia manazava izay The Good Life tena: ny fiainana ao ny vokatra sy ny mbola mihoatra na inona na inona eto amin'ity tontolo ity tolotra. sary an-tsaina: The Good Life. – Trailer #1 – Trailer #2